Osimiri kacha mma na Costa Rica | Akụkọ Njem
Osimiri kacha mma na Costa Rica
Njem njem | | America, Costa Rica, General
Otu n'ime nnukwu njem nleta na Caribbean bụ Costa Rica, mba nke nwere ihe karịrị kilomita 1200 nke ụsọ oké osimiri, n’agbata ụsọ mmiri Caribbean na nke Pacific. Ọ bụ ya mere oke na ụdị osimiri ya ji dị mma. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ịkpọ aha ole na ole n'ime ndị a osimiri kacha mma na Costa Rica. Na-eme atụmatụ njem? Ya mere buru ha n'uche:
na osimiri Samara na gburugburu ya Ha bụ ezigbo ọla, nwere aja ọcha, ndo nke nkwụ na mpekere. N'ime ha bụ ọla ọcha, Buena Vista na Carrillo. Ala nke gbara Berrigona gburugburu ka Mel Gibson zụrụ mana oke osimiri, dị ka osimiri niile dị na mba ahụ, bụ ọha.
La Osimiri Montezuma ọ pere mpe ma mara mma. Ọ bụ na Nicoya peninshula na ọ bụ a dịtụ hippie osimiri. Ekwenyeghi: mmiri mmiri na anụ ọhịa nke Curú na Cabo Blanco.
La Osimiri Manuel Antonio Ọ bụ ebe a ma ama kemgbe ọtụtụ afọ - Enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na osimiri ndị ahụ bụ akụkụ nke ogige mba nke nwere ugwu na oke ọhịa nke enwe na-ebi. Ọ bụ ebe dị oke ọnụ, ee.
na Punta Uva na Manzanillo osimiriN'ebe ọwụwa anyanwụ ụsọ mmiri, ha bụ nrọ Caribbean ọzọ nwere mmiri turquoise, mmiri coral, aja ọcha na nkwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Costa Rica » Osimiri kacha mma na Costa Rica
Nudism na Colombia
Playa Luna: Osimiri nudist a kacha mara amara na Chile